Eminyakeni yamuva, ngokuya wawezwa yini amazwi ukuthi udinga ukuqapha ezingeni nomswakama efulethini. Ukulondoloza nomswakama ngaphakathi nemigomo lemisiwe ledzingeka kuzosiza ukuthuthukisa impilo futhi yokwakha isimo ukhululekile zasendlini. Ikakhulukazi kubalulekile ukusebenzisa zonke izimo okungenzeka heater ebusika, okuyinto emoyeni womile ezingeni esibucayi. Ngeshwa, izindlela ngakwesokunene cishe akunakwenzeka moisten emoyeni egumbini. Ukuzuza evamile umswakama ezingeni usizo humidifiers. Izibuyekezo wabo kaningi kuyothuthukisa ingqondo yakho. Lokhu okusunguliwe ezimangalisayo isintu kwaba cishe panacea kwekhulu XIX.
abakhiqizi Namuhla sisinika anhlobonhlobo zonke izinhlobo humidifiers, ukusuka kokulula kuya okunethezeka.
Kuze kube manje, abathengi uphiwa izinguqulo ezine humidifiers:
1. humidifiers kwesiko. Izibuyekezo wabo omuhle. Ubuchwepheshe, esetshenziswa kule amafutha okuthambisa bendabuko, esekelwe ukuhwamuka zemvelo. Wonder okusungulile wagcwala amanzi, okuyinto kamuva hits isici ahwamukayo.
Ngaphezu kwalokho, aboshelwe fan iyunithi udonsa umoya egumbini futhi, yokuxosha ngokusebenzisa i-elementi ukuhwamuka, hydrates - etholwe eMhlanganweni ekhishwa emoyeni ezinomswakama.
Isimiso esinjalo wokusebenza isetshenziswa humidifiers "Venta". Izibuyekezo kwamakhasimende uzokusiza ukukhetha idivayisi.
2. I humidifiers umusi. Izibuyekezo Umthengi kuthiwa Positioning ke njengoba omunye izinhlobo ephephile of humidifiers. Ubuciko nomsebenzi wabo kusekelwe ngokuletha amanzi ukuze ngamathumba. Amabili electrode esishunyekiwe ngesikhathi ukuxhumana amanzi Kwenziwa phakathi zamanje ukuthi kunomthelela amanzi abilayo. Uma humidifier siyaphela amanzi, electrode abavunyelwe ukukhuluma, futhi iyunithi ngokuzenzakalelayo kuvaliwe.
3.Ultrazvukovye humidifiers. Enye intuthuko entsha kule ndawo. Isici esikhethekile kule divayisi kuyinto imvamisa high isixwayisi ipuleti, vibration okuyinto ezidabula amanzi ku ngomzuzu izinhlayiya. Esigabeni esilandelayo amaconsi eliphuma ngaphezu ipuleti, ukudala ifu kanye fan esakhelwe, yokuxosha emoyeni ngokusebenzisa le ifu, uyawubhidliza kuze kube Abuyela endlini emuva kwezikhathi. Omunye izinzuzo, onikeza humidifier ultrasonic (izilinganiso siliqinisekise), - zokuhlanzwa air: umusi uphoqelekile ukuba uphume ngokusebenzisa lemifanekiso ekhethekile, futhi zonke microparticles eziyingozi ahlale kuwo.
A inzuzo ngokwengeziwe humidifier ultrasonic - yikhono ukufudumeza amanzi ku-80 degrees Celsius, amagciwane ngaleyo ndlela uyafa. Idivayisi alesi sigaba ine kudivayisi yangaphakathi ukuthi inquma lizinga umswakama (humidistat).
Indlela ephumelela kakhulu zamahhovisi, reception amakamelo, salon, amakamelo humidifiers ultrasonic. Izibuyekezo zabanikazi abafanele uqinisekise lesi sitatimende.
4. izakhiwo sezulu. Ukuzuza zokuhlanjululwa, humidification, amakha usizo isimo sezulu. Ubuchwepheshe "esiliva induku" kunomthelela ukugcwaliswa yamanzi ion esiliva, ngawo libhujiswa ezingaphezu kuka-700 izinhlobo amagciwane namagciwane.
sezemisebenzi humidifier indlela ihlanganisa imisebenzi amadivaysi ngenhla kanye ezengeziwe yokuhlanza ezintathu isigaba. Isinyathelo zayo zokuqala - ekhethekile Allergy HEPA ukuhlunga okuyinto chaza uthuli, impova, izimpaphe, izinwele isilwane, njll Ngaphezu kwalokho - .. Evaporator impregnation elwa namagciwane okuyinto ibulala amagciwane. Khona-ke, lo wokugcina ngokucubungula isinyathelo - isihlungi carbon, olubamba amaphunga, kagwayi.
Humidification nomoya uhlanzekile inkinga ebalulekile, ozokusiza ukuxazulula humidifiers. Impendulo evela kumakhasimende nabanikazi alamathuluzi kungasiza lapho ukhetha idivaysi eliphezulu, okuzokwenza lula ukuphefumula ngoba wena nendlu yakho.
Maria Osipova - anti-undlovukayiphikiswa fighter abadumile komhlaba,
Yini ukulinika owesifazane oneminyaka engamashumi 50